5 Tips For Improving Work Ethics - JobExpress
Find Talent or Post Jobs
5 Tips For Improving Work Ethics
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဆင်းရဲဒဏ်တွေ ခံစားရတဲ့ကာလတော့ ရှိကြပါတယ်။ မနက်ရောက်တိုင်းရုံးမသွားချင်တဲ့စိတ်၊ အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီး မပျော်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ ။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်က အလိုလိုကျဆင်းလာပြီး အလုပ်ပျော်တဲ့သူဖြစ်မလာတော့ပါဘူး။ ဒီလို စိတ်ပင်ပန်းမှုဒဏ်တွေကြားကနေ လွတ်မြောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေပို Strong ဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ အာ့နည်းလမ်း‌လေး တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?
” ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး ” ဆိုသလို ကိုယ်ကျန်းမာမှစိတ်ကျန်းမာတာ‌ဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က မနက်နှိုးပြီဆိုတာနဲ့ ရုံးသွားဖို့ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကြ ကိုယ်က ညဘက်အိပ်ရေးမဝတဲ့အခါ Alarm သံက ပထမဆုံးအနေနဲ့ စိတ်ရှူပ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အိပ်ရေးကမဝ ၊ စိတ်ရှူပ်နေမယ်ဆိုရင် အလုပ်ကောင်း‌ကောင်း လုပ်နိုင်ဖို့လည်း စိတ်မပါတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနက်ပိုင်းတွေဆို ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေး Exercises တွေ၊ ညဘက်စောစောအိပ်တာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာဟာရမျှတတဲ့ အစားစာတွေစားပြီး ကျန်းမာလှပစွာ နေထိုင်ပါ။
အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်သူက တိုးတက်မဲ့သူပါ။ ဘဝမှာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာထဲမှာ အချိန်လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို ပေးထာတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူက လျင်လျင်မြန်မြန် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ်က အလုပ်ခွင်မှာဆိုရင်လည်း Meeting မစခင်မှာ ကြိုရောက်နေပြီး ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြင်ဆင်ထားခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ Ability ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ Timetable အတိုင်း တိတိကျကျလုပ်တတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပါ။
(၃) ကိုယ့်ရဲ့ Professionalism ကို Develop လုပ်ပါ။
အလုပ်ကို Professional လုပ်နိုင်တဲ့သူက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုပြီး Strong Work Ethic ဖြစ်စေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Attitude တွေ၊ Values တွေကို Improve ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အလုပ်နဲ့ Personal ကိုသီးသန့်ထားပါ။ ကိုယ်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအေပါ်မှာ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတင်းအဖျင်းပြောတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ပြီး အပြောနဲ့အလုပ်ညီတဲ့သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တာတိကျတဲ့သူ၊ သတ်မှတ်တဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူက်ို လူတွေက အားကိုးတတ်ကြပါတယ်။ အခုလို အားကိုးခံရပြီဆိုရင် ကိုယ်က နောက်ထပ်အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေက ကိုယ်တတ်မြောက်တက် ပိုပြီးထူးချွန်တဲ့သူဆိုရင် အားကိုးအားထားလုပ်ကြတာကြောင့် လူတိုင်းရဲ့ Mentor တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။
(၅) Work life Balance
ကိုယ်ကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလုပ်ရှင်ဘက်က Appreciate လုပ်တဲ့အထိ ကြိုးစားပြဖို့လည်းအရေးကြီးသလို အလုပ်နဲ့ဘဝ မျှတစွာ နေထိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်အရာမလို လွန်လွန်ကျူးကျူး လုပ်ပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ မိသားစု‌တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်း အချိန်တစ်ခုပေးပါ။‌ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အနားယူခြင်းကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ ။
ကိုယ့်ရဲ့ Career အတွက် Strong Work Ethic ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ‌ ပျော်ရွှင်မှ အလုပ်လုပ်ရာမှာတက်ကြွမယ်။ တက်ကြွမှလည်း အလုပ်ပေါ်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ်၊ ပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ ပြီးမြောက်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်မှာပြထားတဲ့ အချက်တစ်ခုချင်းဆီကနေ ကိုယ်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အရာတွေကိုပြုပြင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Strong Work Ethic ကိုတည်ဆောက်စေဖို့ အကြုံပြုရင်း ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Content By Kit Kit
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီလိုအမူအကျင့်တွေ လုပ်မိနေပြီလား?
4 Things to do on New Year
2020 နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် Booming ဖြစ်လာနိုင်သော လုပ်ငန်း (၁၀)မျိုး – အပိုင်း (၁)
လူမှုဖူလုံရေး ( SSB )ဆိုတာဘာလဲ?
Business Plan For 2021
COVID-19 အလွန် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ ? ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွား နိုင်လဲ ?
Work From Home နဲ့ အိပ်ရေးပျက်ခြင်:
လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းကြားက Internal Recruitment
အလုပ်လုပ်ရင်း အိပ်ငိုက်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ?
© 2020 Blog JobExpress